« MIFANDRARY FITIA »: FANKALAZANA NY FAHA-20 TAONA NANORATAN’I FELANA – Blaogin'i Voniary
Hotanterahina ao amin’ny TAHALA RARIHASINA izy io ny 6 hatramin’ny 9 Desambra ary hofaranana amin’ny sakafom-pifaliana ao amin’ny HAITSIRON’IARIVO ny 10 Desambra. Toy izao àry ny andinindininy momba io hetsika io.
Io no lohatenin’ny amboaran-tononkalo nosoratan’i Felana RAVELOARISON na Felana izay havoaka manokana amin’ity fankalazana ny faharoapolo taona ity. Raha tadidintsika efa namoaka ny « MANKATIA » koa izy tamin’ny fahafolo taona nanoratany. Ny hoe mifandrary fitia raha fakafakaina dia toy izao. Ny matoanteny mifandrary dia avy amin’ny fototeny hoe rary izay ilazàna akora na zavatra maro mifampidipiditra. Ny rary koa dia midika hoe vavaka na tso-drano. Amin’io fotoana io izany no anehoan’i Felana ireo sehatra maro izay mifameno ka manome ny maha-izy azy. eo amin’ny zava-kanto (tononkalo, kabary sy asa tànana). Amin’io hetsika koa no hifampitondra firarian-tsoa i Felana sy ny mpankafy. Ny amin’ny hoe fitia indray dia tara-kevitra voizin’i Felana ao amin’ny asa sorany hatramin’izay ny fitiavana amin’ny ankapobeny. Izay no nahatonga ny fiantsoana azy hoe « Poetan’ny fo tena tia ». Koa inona moa fa tsy tafaray ny tia sy ny manina mandritra io hetsika io.
MANASA ANAO I FELANA
Noho izany, miandry anao i Felana ny 6 hatramin’ny 9 Desambra ao amin’ny Tahala Rarihasina. Ho hitanao mandritra io fampiratiana io ny tontolon’i Felana na tononkalo izany na kabary na peta-kofehy. Asainy manokana ny MPIANATRA sy ireo MANIRY HO MPANORATRA mba ho tonga hitafatafa aminy. Vonona izy ny hizara ny traikefany sy hamporisika ireo zandry mba ho fampiroboroboana ny zava-kanto malagasy.
Ny 10 Desambra indray dia sakafom-pifaliana no hotanterahina ao amin’ny Haitsiron’Iarivo (INIFRA – Alarobia). Hanotrona azy amin’io lanonan-dehibe io ny mpanakanto malaza toa an’i Njakatiana, Ariane ary Elsie. Ho tonga ao koa mazava ho azy ny tarika Narisoa izay misy an’i Felana ary Jess Rakoto izay efa mpiara-miasa aminy akaiky hatry ny ela.
Izahay eto amin’ny blaogin’i Voniary dia miarahaba sahady an’i Felana amin’izao fankalazana ny faharoapolo taona nanoratany izao. Mirary soa azy ho an’ny roapolo taona manaraka, mba hijoro ho kintan’ny tononkalo malagasy sy hanatratra ny lafatra hatrany.
felana faribolana sandratra, felana mpanoratra, felana raveloarison, felana roapolo taona, mifandrary fitia, tononkalo malagasy